China IP66 engenanto mveliso kunye nabenzi | Feilifu
• IP66 ikaliwe xa isetyenziswa.
• Inika amandla wokumisela ngokwakho ukuhambelana nesicelo.
• Yamkela i-86x86mm, i-86x146mm switch kunye nesokethi, yamkela ne-MCB, SPD okanye isinxibelelanisi sikaloliwe sedin.
Ukulungisa ngokuthe ngqo iswitshi kunye nesokethi ngaphakathi, akukho sidingo sokususa isiciko esivaliweyo.
• Umbala wekhava ungenziwa ngemfuneko.
Umzekelo woKhetho loCwangciso
Isiseko samawele angama-86 * 146
Iphaneli yokutshintsha inokuxhonywa ngokuthe ngqo okanye itshintshwe ngaphandle kokuvula ibhokisi engenamanzi. Iphaneli emileyo ejijelwe phantsi ukunika uyilo lwendlela, inokumiswa kumazwe ahlukeneyo ngesokethi esemgangathweni yokuvuza, (uyilo lweenkcukacha ezizodwa)
Onke amazwe anokuvala isiciko emva koqhagamshelo lweplagi, ukhuseleko luthembeke ngakumbi.
Iphaneli yokutshintsha inokufakwa ngokungqalileyo ngaphambili ngaphandle kokungena ukuze ivule ibhokisi engenamanzi.Iphaneli efakiweyo ejijekileyo ukuze inike uyilo lwendlela, inokufakwa kumazwe ahlukeneyo okurhola isokethi kunye nesokethi eqhelekileyo. Kwangelo xesha, uyilo lunokufaka isekethe encinci, ukunyuka kunye nesikhokelo soololiwe esixhasa isixhobo sokufaka. Imveliso enye inokubuyiselwa enye okanye ezimbini iiphaneli ezingama-86 ngokweemfuno, ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi.
Egqithileyo Ibhokisi ye-TM-502S Junction
Okulandelayo: I-IP55 Series yokutshintsha okungaphezulu kwamanzi